लिम्वूवान - विविध सामग्री: शोभा खजुम
भिडियो वार्ता । तस्विरहरु हेर्न क्लिक गर्नुहोस् ।
लामो समय देखि लिम्वू भाषाको चलचित्रमा मात्र नभएर नेपाली चलचित्रमा समेत नायिकाको भूमिका कुसलताका साथ निभाउदै आउनु भएकी अत्यान्तै मिजासीली स्वभावका धनि नायिका शोभा खजुम अनवरत रुपले आफ्नो चलचित्र प्रतिको लगावलाई लगानी गर्दै आउनु भएको छ । चलचित्र प्रति सानै देखि लाग्ने अठोट वाधेकी शोभा हाल पनि उत्तिक्कै जोसका साथ लागि रहेको वताउछिन् । करीव एक दर्जन जति लिम्वूभाषा तथा नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरीसकेकी छिन्। विवाहको उमेरले छोड्न लाग्दा पनि अझै पनि प्रस्ताव आएमा वा मन मिल्दो जोडी पाएमा विवाह गर्ने पक्षमा छिन् शोभा । वाचुन्जेल कला क्षेत्र मै रहेर काम गर्ने प्रतिवध्दता जाहेर गर्छिन् । समाजलाई कला मार्फत रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उनको धारणा छ । र कला भन्ने कुरा कहिल्यै मर्दैन त्यसै भएकोले त्यो कृति जस्तै रहन्छ सोच्ने शोभा युवा पीडीकाहरुलाई पनि यस क्षेत्रमा लाग्न प्ररीत गर्छिन् । उनले आफ्नै लगानी र निर्माण गरीएको लिम्वूभाषाको चलचित्र थत्थामाको प्रदर्शनको सिलसीलमा हंगकंग आउनु भएको वेला उनै कुसल नायिकासंग लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम्का व्लगर टंक सम्वाहाम्फेले गर्नुभएको कुराकानी पाठकहरुको समक्ष प्रस्तुत गरीएको छ ।
१.कला क्षेत्रमा तपाई कहिले देखि लाग्नु भएको हो ?
म कला क्षेत्रमा लागेको वाल्यकाल देखि नै हो । विद्यालय पढ्दा प्राय म नाचगानमा भाग लिन्थे सायद यिनै कारणले पनि यतातिर लागेको हुनुपर्छ । तर चलचित्रमा भने अलि ठुलै भएर मात्रै लागेकी हु ।
२. तपाईले अभिनय यात्रा सुरु गर्दा पहिले नेपाली भाषाको चलचित्रवाट हो कि ? लिम्वूभाषाको चलचित्रवाट हो ?
मैले सर्वप्रथम अभिनय यात्रा लिम्वूभाषाकोचलचित्रवाट सुरु गरेकी हु । त्यसैले अन्य चलचित्रमा खेल्ने श्रोत नै लिम्वूभाषाको चलचित्र वन्न गएको छ ।
३. अभिनय क्षेत्रमा लाग्नको लागि तपाईले औपचारीक रुपले कुनै विद्यालयबाट सिकेर आउनु भएको हो कि -त्यतिक्कै म यता लाग्छु भनेर आउनु भएको हो ?
म कुनै विद्यालयबाट औपचारीक रुपले सिकेर अभिनय क्षेत्रमा आएको होईन । मलाई सानै देखि अभिनय गर्ने इच्छा थियो । त्यसैले हृदय देखि नै राजेर यता लागेकी हु । अभिनय भन्ने कुरा विद्यालयबाट सिकेर सिकिने कुरा होईन जस्तो लाग्छ । किनभने अभिनय भनेको भित्र हृदय देखि नै म यो चरीत्रको लागि अभिनय गर्दैछु भनेर मानसिक रुपले तयार भएर गर्नु पर्छ । कक्षा लिएर सिके पनि त्यहा प्राविधीक ज्ञान मात्र दिइने हो । यसरी गर्ने भनेर मार्ग निर्देशन मात्र गरीने हो । वास्तवमा अभिनय आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्देशकले पनि अभिनय सिकाउने होइन उसले मार्ग निर्देशन गराउने मात्र हुन् । पछि आएर मैले नृत्यमा भने औपचारीक रुपले डिप्लोमा सम्मको कक्षा पुरा गरेकी छु ।
४. लिम्वूभाषाकोचलचित्रहरु हाल आएर पहिलेको भन्दा धेरै वन्न थालेकाछन् यसलाई कसरी मुल्याङ्कन गरी रहनु भएको छ ?
लिम्वूभाषाको चलचित्रहरु वन्नु हामी लिम्वू अथवा लिम्वू भाषीहरुको लागि ज्यादै राम्रो कुरा हो । पहिले पहिले त थोरै मात्र लिम्वूभाषाको चलचित्रहरु वन्थे । अहिले आएर यसरी पहिले भन्दा धेरै वन्नु समयको माग साथै हाम्रो आवश्यकता पनि हो । किनभने पछिल्ला पीडीका लिम्वूहरुले आफ्नै भाषा संस्कृति समेत विर्सदै गएको हुनाले चलचित्र मार्फ यी कुराहरु शिक्षाको रुपमा अगाडी ल्याउन मद्दत गर्दछ । अहिले नै लिम्वूभाषाका चलचित्रहरुले व्यावसायीक रुपले सफलता हासिल नगरे पनि यसको आवश्यकता भने टड्कारो देखिन्छ । तर्सथ भाषा संस्कृति जगेर्ना कै लागि पनि लिम्वूभाषाका चलचित्रहरु वन्न एकदमै जरुरी देख्छु ।
५. लिम्वूभाषाको गीतमा भिजुअल गर्ने र लिम्वू सम्वन्धि डकुमेन्ट्रिहरु पनि वनाउने योजना रहेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यो कुन उदेश्यले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो मैले लिम्वूभाषाको राष्ट्रिय गीतहरुमा भिजुअल वनाउने योजना वनाएको छु साथै लिम्वू सम्वन्धि डकुमेन्ट्रि पनि । यो वास्तवमा लिम्वूवान सम्वन्धिका कुराहरु जानुन् वुझुन भन्ने उदेश्यले अगाडी ल्याउन लागेकी हु । कतिपय लिम्वूहरुलाई लिम्वूवान किन चाहियो भन्ने कुरा पनि थाहा नहुन सक्छ । यो काम एक प्रकारले लिम्वूवान सम्वन्धि जनचेतना जगाउने काम पनि हो । यिनै उदेश्यहरुमा केन्द्रित रहेर यो काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचेकी छु ।
६. हङकङमा आएर तपाई आफैले अभिनय र निर्माण गर्नु भएको लिम्वूभाषाको चलचित्र थत्थामाको प्रदर्शन गर्नु भयो दर्शकहरुवाट कस्तो प्रकारको प्रतिकृया पाउनु भयो ?
मैले हङकङमा सोचेको भन्दा धेरै राम्रो प्रतिकृया दर्शकहरुवाट पाए । यसले गर्दा मलाई के लाग्यो भने लिम्वू भाषाको चलचित्र पनि हङकङमा वसोवास गर्ने लिम्वू दाजुभाई दिदीवहिनीहरुले धेरै मन पराउनु हुदो रहेछ भनेर । यति व्यस्त समयमा पनि मैले अभिनय र निर्माण गरेको चलचित्र हेर्न कै लागि काम छाडी छाडी आउनु भयो । यो मेरो लागि अत्यान्तै खुशीको कुरा हो । कतिपय दर्शक त चलचित्र आधी पुगी सक्दा पनि हलमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यसरी वहाहरु आउनु लिम्वू भाषाको चलचित्र प्रति आस्था माया हुनु हो । त्यसैले वहाहरुलाई मेरो तर्फाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
७. नेपालमा हाल लिम्वूवान स्वायत राज्यको माग अगाडी वढीरहेछ त्यसलाई एउटा कलकारको हैसियतले कसरी हेरीरहनु भएको छ ?
नेपालमा लिम्वूवान स्वायत राज्यको माग अगाडी वढ्नु एकदमै जायज कुरा हो । र म कलकारको हिसावले पनि यो मागलाई सकरात्मक रुपले हेर्छु । किनभने नेपाल विभिन्न जातजाति भाषा भाषीहरुको देश हो । कुनै जाति र भाषाको उत्थान निर्वाध रुपले विकास हुन पाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अवका दिनहरुमा देश अग्रगामी रुपले अगाडी वढाउदै लैजाने हो भने जात अनुसारको प्रान्तिय सरकार हुन आवश्यक छ । र त्यो प्रान्तको अधिकार त्यहि क्षेत्रका जनतालाई नदिए सम्म देशले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । इतिहासमा पनि लिम्वूवानको अस्तित्व देखिन्छ त्यसैले अव भने लिम्वूवान जिवन्त रुपले हुनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
८. लिम्वूवान स्वायत राज्य स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा तपाई कतिको विश्वस्त हुन्छ ?
म लिम्वूवान स्वायत राज्य स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा एकदमै विश्वस्त छु । किनभने विभिन्न संघसंस्था देखि लिएर पार्टीहरुले समेत स्वायत राज्य हुनु पर्छ भनेर मुख्य एजेण्डाको रुपमा उर्ठाई राखेकाछन् । त्यो समयको माग पनि हो । नेपालमा वसोवास गर्ने विभिन्न जनजातिहरुको मुख्य माग पनि त्यहि भएकोले अन्तरीम सरकारले नै उक्त कुरालाई सम्वोधन गर्नु पर्छ । मलाई लाग्छ कुनै न कुनै दिन लिम्वूवान स्वायत राज्य स्थापना भएरै छाड्छ ।
९. तपाई अहिले सम्म अविवाहित नै हुनुहुन्छ । विवाहको लागि सोचे जस्तै जिवन साथी नपाएर होकि -प्रस्तावै नआएर हो ?
म अहिले सम्म अविवाहित रहनुका विभिन्न कारणहरु छन् । खासगरी व्यवहारीक,शैक्षिक र कार्यव्यस्तता कै कारणले त्यसो हुन गएको हो । प्रेम पत्र र विवाहको लागि थुप्रै प्रस्तावहरु आएका हुन् तर ती माथि कै कारणले त्यतातिर मोडिन सकिएन । मलाई लाग्छ जिवनमा विवाह नै गर्नु पर्छ भन्ने छैन होला नि । हेरौ भविष्यले के वताउछ त्यस्तै मन मिल्ने जोडी पाएमा विवाह गर्न पनि सकिन्छ ।
१०. तपाईको आफ्नो जिवनमा घटेका त्यस्ता अविश्मरणिय घट्नाहरु छन् कि ?
थत्थामा लिम्वूभाषाको चलचित्र सुटिङ चलिरहेको वेला सिक्किमको गान्तोकमा एउटा अविश्मरणिय घट्ना घटेको छ त्यो म जिवन भरी विर्सन सक्दिन । सन्जोग कस्तो पर्यो भने हाम्रो सुटिङ चलिरहेको युनिटको नजिकै एउटा अचानक दुर्घटना भयो । तर्सथ हाम्रा युनिटका सहकर्मीहरु दुर्घटनामा परेकालाई उद्दार गर्न घट्ना स्थल तिर सवै लागे त्यसवेला म एक्लै भएर एउटा ढुङ्गा माथि गएर वसे । दुर्घटना भएको कुरा गाउलेले थाहा पाए पछि घट्ना स्थल तिर थुप्रै मान्छेहरु आए । घट्ना स्थल नजिकै त्यो पनि ढुङ्गा माथि एक्लै वसेको देखेर ती सवै म भए तिर आएर मलाई पो हेर्न थालेघट्नाबाट वचेको मान्छे भनेर । मलाई देखेर ती सवै चुकचुकाएर सहानुभूतिको शव्द पो पोख्न थाले । ल हेर लुगा पनि फाटेछ मान्छेको ज्यान धन्न वचेछ भनेर वास्तवमा म कुनै दुर्घटनामा परेको थिईन । थत्थामा चलचित्रको लागि एउटा वहुलाही आईमाईको चरीत्रमा मैले अभिनय गर्नु थियो र मैले त्यहि अनुरुपको भेषभुष्षा लगाएको थिए । तर ती मान्छेहरुले मलाई दुर्घटनामा परेर वचेको मान्छे भनेर सम्झे । तर तिनी एकैछिनमा दुर्घटना स्थलतिर गए । मलाई पनि अप्ठ्यारो लागेर पुन युनिटको गाडीमा गएर वसे । यस वेला मलाई के लाग्यो भने मैले गर्नु पर्ने चारीत्रीक हाउभाउ एकदमै जिवन्त छ भन्ने कुरा थाहा पाए । त्यस प्रति मलाई गौरव लागेर आयो । यो नै मेरो जिन्दगीको अविश्मरणिय क्षण हो ।
११. अभिनय क्षेत्रमा लाग्न चाहाने आउदो युवा वर्गलाई कस्तो सुझाव दिन चाहानु हुन्छ ? यो क्षेत्रमा कहिले सम्म लाग्ने विचार गर्नु भएको छ ?
म यो क्षेत्रमा लाग्न चाहाने युवा वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न चाहान्छु । यो क्षेत्रमा निरन्तर लागि रहे नराम्रो छैन । आफ्नो कला समाजमा देखाउने अवशर मिल्छ । त्यो पनि एउटा शिक्षा नै हो । यो क्षेत्रलाइ अझ फराकिलो वनाएर लैजाने युवापीडीहरुको ठुलो हातमा छ । आफ्नो कला प्रदर्शन गरेर भाषा सस्कृतिको जगेर्ना गर्नु भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो । यो दायित्व कलकारले कला क्षेत्रवाट वहन गर्नु जरुरी छ । मान्छेको जिवन मरणशील छ तर कला भन्ने कुरा कहिल्यै मर्दैन । जहा सम्म म यो क्षेत्रमा जिवनभर लाग्छु भनेर सोचेको छु । अभिनय भन्ने कुरा पनि अम्मल जस्तै हो त्यसैले छोड्न सकिन्न ।
१२. अन्तमा संसारभर छरीएर रहेका तपाईका दर्शकवृन्दहरुलाई लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकमवाट केहि शन्देस दिन चाहानु हुन्छ कि ?
र्सवप्रथम लिम्वूभाषाको चलचित्रलाई सकरात्मक रुपले हेरी दिनुहोस् । यसरी हेरीदिनु भयो भने कलाकर्मीलाई प्रोत्साहन मिल्दछ । विश्वको जुनसुकै भागमा लिम्वू दाजुभाई दिदीवहिनीहरु छरीएर रहे पनि लिम्वूवानको एकजुट हुन आव्हान गर्दछु । यसरी मेरो विचारहरु संसारभर फैल्याई दिनु भएकोमा यस व्लगका सन्चालकलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहान्छु।
Posted by limbu at 7:45 PM
चुम्मा,लुङ् -चुम्लुङ् -चुम्लोक
लिम्बू भाषामा बन्देज
सुम्निमा र पारुहाङ् - ‍लोक कथा
बूढा सुब्बा - लोक कथा
' सार ' गीति एल्बमको बारेमा
साम्‍मिला सिगाङ्‍ ळिम्‍बुवान
लिम्बू संस्कृति धाननाचः-
कवितामा सङ्क्रमण-सिद्घान्त अथवा नयाँ कविताको खोजी
लिम्बुवान् राष्ट्रिय गीत
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको एकसय बन्दसुची दर्ता
गाउँठाउ समावेशी भए देश पनि समावेशी हुनेछ